कुन बैंकका कुन-कुन शाखा खुल्छन् ? यी ३ बैंकले मात्रै दिए जानकारी – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ चैत ११ गते २०:२६ मा प्रकाशित
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकाले आजदेखि एक सातासम्म लक डाउन अर्थात अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर निस्कन बन्देज लगाएको छ ।
सरकारले लक डाउनको निर्णयि गरेसँगै कुनैपनि नागरिक सरकारको अनुमतिबिना आफूले चाहेको ठाउँमा आवतजावत गर्न पाउने छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा पनि सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको पैसा झिक्न पाउन भनेर राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सावधानी अपनाउँदै र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सकेसम्म सेवा दिन निर्देशन दिएको छ ।
आज काठमाडौं उपात्यकामा सार्वजनिक विदा थियो । भोलि कुन कुन बैंकका कुन कुन शाखा खुल्छन् त ? हामीले यस विषयमा धेरैवटा बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई सोधेका थियौं । तर, धेरैले अहिलेसम्म कुन खोल्ने र कुन नखोल्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको तर केही शाखा खोलेर सेवा दिने जानकारी दिए ।
तर, यस्तो अवस्थामा पनि केही बैंकले भने आफ्नो वेवसाइटमा सूचना राखेर लक डाउन अवधिभर कुन कुन शाखा खुल्छन् भन्ने जानकारी दिएका छन् ।
यद्यपि भोलिसम्ममा सबै बैंकहरुले खुल्ने शाखाको बारेमा जानकारी गराउने नै छन् ।